Bvudzi Rezvisikwa: Tsanangura Mhemberero, Mungaita Sei Kinky Hair Curly 2020
Nzira Yokushandura Musoro Kinky Kuchena Mvere
1 ita mvere dzemuviri dzakanyarara
1.1 Zvimwe nzira:
2 nzira yekutsanangurira mavara
2.1 Danho 4, chengetedza zvipfeko munzvimbo: Ita mvere dzemazuva akadzika:
2.2 Danho 5 rinyorera bvudzi rako:
ita mvere dzemuviri dzakanyarara
chithunzi chikwereti: @naturallydidi
Isu tose tinoda kuve zvakakwana murudo nemavhudzi edu ezvisikwa. Zvisinei, inogona kuva yakaoma uye inogumbura chaizvo apo iwe unoda kuti zvipfeko zvako zvepanyama zvivepo, uye zvose zvaunogona kutarisa ndezvekotoni kutarisa nechinyakare pano kana ipapo. Ndine mufananidzo 4a 4b bvudzi, uye ini ndinoda kuti mhuka yangu yakanyoro kana yakanyorova mushure mekushambidza uye yakadzika, asi kana vhudzi rangu raoma, rinochinja zvikuru. Ndaimbova negodo kune avo vakasununguka vhudzi rechisikiro kusvikira ndadzidza kuchengetedza nekubata bvudzi rangu nenzira yakarurama. Chinhu chakutendeuka zvipfeko zvechisikigo murefu kwenguva refu kinky curly hair zvakakodzera kuisa hydration uye nekuvhara mavhiri acho panzvimbo apo ivo vanoumba. Iyi nheyo inonyanya kuhanzvadzi dzangu dzine mhando 4 mvere dzakaita se4a 4b uye 4c uye vanoda kuti vhudzi ravo rione sechengeti uye zvakatsanangurwa.
CHITATU 1: Ziva mararamiro ako uye une zvaunotarisirwa kuti ndezvipi zvingave zvakaita bvudzi rako. Kana iwe uine mhuka yeCNCXc, iwe haugoni kutarisira kuveura vhudzi rako kuva mutsara we 4b. Izvozvo zvisingatarisiri kutarisira. Iko kusvibiswa kwebvudzi rako kunogona kutarisa kuti inoratidzika sei kana yakazara hydrated uye yakazara nemvura. Kazhinji, vhudzi redu rinogona kutarisa mazinga e3-1 kana paine mvura yakakwana. Icho chinyengeri ndechokutora mavhiri acho apo bvudzi rako riri mune iyo mamiriro ezvo ndokudzivhara panzvimbo.
STEP 2: uzive bvudzi rako porosity level: To Dzorera kinky vhudzi kuva bvudzi rakanyorova, unofanirwa kunzwisisa kuti ungasvibisa sei bvudzi rako zvakanaka. Ichi
chithunzi chikwereti: @olive_chels
Inoda kuti iwe uzive bvudzi rako porosity level uye zvipi zvinowanikwa zvakanaka zvinokubatsira iwe zvinopikisana neizvipi zvinogadzira vhudzi rako. Kana uine chikamu chepasi, izvo zvinoreva kuti zvakaoma kuti unyorove bvudzi rako; Zvisinei, kana iwe uchiita mhepo, inoramba ichireruka kwenguva refu. Musoro wemusoro unobata nekukurumidza uye unobvisa unyoro nyore; zvisinei, iyo inorasikirwa nemvura iyo nyore nyore. Kunyoresa kunoreva nhamba ye pores mune bvudzi rako. Ndine imwe nyaya inopinda zvakadzama pamusoro porosity pano.
Kana zvimwe zvose zvisingakwanisi, unogona kushandisa kinky curly weave extensions zvakaita se bvudzi rakapfekedzwa vhudzi ikozvino,
3c clip-ins, uye wigs iyo ichiri kukupa iwe kutarisa kwechisikiro kunze kwekuita sokunge iwe uri kupfeka upanduri. My Natural Hair Extensions inopa exclusively kinky curly products nokuda kwezvinhu zvose zvakasikwa sista! Panzvimbo pacho, une vhudzi rakabvongodza, kinky mvere dzemaodzanyemba, afro kinky, afro curly, 4a 4b kana 4c, kune mvere dzenkiest, takakuwana iwe.
nzira yekutsanangurira mavara
Nhanho 3 moisturize: mvura ndiyo yakanakisisa yekugadzirisa bvudzi racho kubva kinky yaro. Mvura inzvimbo yakakura ye hydrator uye ichaita kuti mapepa ako apfe. Chinhu pamusoro pemvura inomesa nekukurumidza, uye mapira edu anodzokera kumakinks! Kana bvudzi racho rizere nemvura, uye iri kunze kwaro kinky state, ino ndiyo nguva yakanakisisa yekuwedzera makiritsi emapiritsi nemafuta anoshanda zvakanakisisa kumhepo yako. Glycerin isiri yemvura-iyo inopinda mukati memusoro webvudzi iroro. Icho hachikudzimwi nekukurumidza semvura uye chinosiya maziso akanaka kune vhudzi. Ndinokurudzira zvikuru kushandisa chigadzirwa ichi mushure mekunge musuka chimiro chako. Zvadaro shandisa mazamu ako echinyakare nemamwe magetsi ekusarudza.
rinotsanangurwa makore ezvisikwa zvevhu
Danho 4, chengetedza zvipfeko munzvimbo: Ita mvere dzemazuva akadzika:
panguva ino, vhudzi rako rinofanira kunge richiri kunyorova uye zvishoma. Iye zvino nguva yaro yekuvhara mavhiri acho munzvimbo. Nenzira yekuita kuti kinky yebvudzi rako ione kutarisa ndeyekumisa shrinkage uye kupera mvura. Iye zvino kuti vhudzi rako riri mumamiriro ayo akaoma, unoda kushandisa gel raunosarudza. Gel yaunoda ndiyo eco styler. Iva nechokwadi chokuti zvigadzirwa zvaunoisa mumapvudzi ako zvisati zvaitwa zvinosanganiswa zvakanaka nejeri uye hazvizosiyi masaira kana machena. Tora gel uye uriise kune vhudzi rako usina kuvhiringidza zvipfeko zvawakasika. Iko zvino zvinyatsovhara mvura yakawandisa ne t-shirt yekare. Nokuda kwemigumisiro yakanakisisa, gara pasi peganda rakaoma kuitira kuti gel rinogona kuomesa nekukurumidza uye kudzivirira kuwandisa kwakawanda sezvinogoneka!
Danho 5 rinyorera bvudzi rako:
Iye zvino kuti vhudzi rako rakaoma, rinofanira kutaridzika rakaita sekunaka uye rakanyarara. Nokuda kwenguva yakareba yakareba uye ivhu, ndinokurudzira kutora mhepo yakadzika uye kutambanudza bvudzi pamidzi kuti iparadze kuoma kwejeri uye kubvumira mweya wako kuva nemuviri usina kuvhiringidza zvipfeko zvawakangobva kuumba. Paunotendeudza bvudzi rako rekinky kuti udzive bvudzi uchishandisa ichi chinyoro uye nzira yekuvhara, bvudzi rako richave rakasimba kubva gel; zvisinei, ichasunungura mushure mezuva 2. Iwe unogonawo kugadzira gel flaxseed yezvigadzirwa zvehupenyu.
chithunzi chikwereti: @beatbynesh
nhanho 6 kurwisa maitiro edzimusoro: Kana iwe usingadi kana unoda kushandisa gel iri iwe iwe unogona nguva dzose kuputika kunze, kubuda kunze, kana mamwe maitiro anoshandisa yako bvudzi rechisiki.
Chokwadi Pamusoro PemaAfro Mvere Mvere
Pros uye Cons of Mini Twist
Kukura Musoro Wako Wemusango
Kururamisira Kusina Kururamisira: Cyntoia Brown
Rated 4.74 kubva 5
Rated 4.70 kubva 5
Coarse Yakarurama Bundle
Afro Kinky Kuchengetedza